UJohn Wayne: Kwenzeka ntoni kwiRevolver yakhe, holster rig, iMagazini yoBomi ka-1972?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » UJohn Wayne: Kwenzeka ntoni kwiRevolver yakhe, holster rig, iMagazini yoBomi ka-1972?
ukonwatyiswa • Imiboniso bhanya bhanya • Utyalo mali • iindaba • abantu • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ivolovolo ebiphethwe nguJohn Wayne kwaye isetyenziswa yinkwenkwezi yaseNtshona kwiimovie ezininzi kutshanje ithengiswe nge $ 517,500 kwiRock Island Auction Company (RIAC). IColt-gun ezintandathu yaqala yafumana uqikelelo oluphantsi yinkampani yefandesi, kodwa emva kokumisela inkqubo ethe ngqo, inzala ikhule ngokukhawuleza phakathi kwabaqokeleli.
Umpu we-Colt Single Action Army unokubonwa usetyenziswa nguWayne kwezi bhanyabhanya zinje Grit True, Umqhagi uCogburn, yaye IiCowboys, phakathi kwabanye.
Okubandakanyiweyo nompu yayinguWayne holster rig, amaxwebhu amaninzi okuqinisekisa, kunye nekopi yango-1972 ubomi magazini
I-Life Magazine yayinoWayne kwiphepha elingaphandle enxibe zombini iirig kunye nompu.
"Iimarike eziqokelelweyo ziye zafumana ukukhula okukhulu kwiintlobo ezahlukeneyo," watsho uMongameli we-RIAC uKevin Hogan. “Xa udibanisa ezimbini zoluhlobo, iimemorabilia zaseHollywood kunye nemipu yokuqokelela, inokubiza ukhuphiswano olushushu. Sonwabile ngomthumeli wethu kwaye sonwabile kuba abathengi bethu bayasithemba ukuba singangqinisisa ezi zinto zimnandi kangaka. ”
Ukukhula kwimarike yeengalo zomqokeleli kuyaqhubeka nokubonisa amanani aphezulu okuthengisa abonwayo kwicandelo lokuthengisa. Ifandesi apho ivolthi kaWayne's Colt yanikezelwa khona yongezwa kwikhalenda ye-RIAC ukuhlangabezana nemfuno ekhulayo. Umnyhadala weentsuku ezi-3 wawunezixhobo zokuqokelela imipu engaphezulu kwama-7,000 kunye nezinto zasemkhosini, izixhobo, imisebenzi yobugcisa, kwaye yaqonda ngaphezulu kwe- $ 8 yezigidi.